ဗဟုသုတ | Page4| Published | ShweHub brought to you by ShweRoom
By jasmineaye 2827 days ago on ဗဟုသုတ from www.maukkha.org
ပြဒါးလင်းဂူသည် တောင်ကြီးခရိုင်၊ ရေငန် မြို့နယ်၊ ရေပုပ် မှ ၁ မိုင်၊ ညောင်ကြပ် မှ ၄မိုင်အကွာတည်ရှိ၊ ပင်လယ် ရေမျက်နှာ ပြင်အထက်ပေ ၁၀၀၀ ၊Nyaungyat 21’6’N latitude , 96’18’ longitude တွင် တည်ရှိသည်။ ဂူ ၂ ဂူရှိပြီး ၂ ဂူစလုံး တောင်ဘက်ကိုမျက်နှာမူသည်၊ ဂူဟာ ခြေသွားလမ်း foot track ရဲ့အထက် ပေ ၇၀ မှာ တည်ရှိသည်။ ရန်သူများ ရုပ်တရပ် တိုက်ခိုက်ခြင်းကို မခံရနိုင်အောင် ကာကွယ်သည့် အနေဖြင့် နေထိုင်ခဲ့သည်ဟု ယူဆရသည်။ ဒေသခံများကတော့ ပဒတ်လိုဏ်ဂူဟု လည်းခေါ်သည်။ ဒေသခံ လူတွေက ပဒတ် ခေါင်းေ
ဦး။ ။ မှန်ပါ၊ လူမစွမ်း နတ်မသည်ဟု ဆိုသောစကားကိုပါ ဘုရား။ ရှေးရှေးကုန်သော မင်းတို့သည် ဘုန်းတော် ကံတော် မစွမ်းခြင်းကြောင့် နတ်များကူညီမစ ရပါသည်ဘုရား။ အရှင့် ဘုန်းတော် က
By cherrythet 2829 days ago on ဗဟုသုတ from www.missgreenlady.com
By cherrythet 2829 days ago on ဗဟုသုတ from shwebeauty.com
သိက္ခာရှိရှိ အရှုံးပေးသွားသော မစ်တ်ရွန်မ်နေ၏မိန့်ခွန်း ကောက်နုတ်ချက်
By aungaung 2876 days ago on ဗဟုသုတ from thevoicemyanmar.com
ကျွန်တော် ခုနလေးတင်ပဲ သမ္မတ အိုဘားမားကို ဂုဏ်ယူပါကြောင်း ဖုန်းနဲ့ဆက် ပြောလိုက်ပါတယ်။ သူ့ကို ထောက်ခံသူတွေရော၊ သူ့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ပေးတဲ့ အဖွဲ့ကိုရော ဂုဏ်ပြုခံဖို့ ထိုက်တန်သူတွေပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ သူတို့အားလုံး အထူးသဖြင့် သမ္မတအိုဘားမားရော၊ သမ္မတကတော်ရော၊ သမ္မတရဲ့သမီးနှစ်ယောက်အတွက်ပါ ဆုမွန် ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ အခုချိန်ဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အတွက် တကယ့် စိန်ခေါ်မှုကြီးနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ကာလကြီးပါ။ သမ္မတ အိုဘားမား အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကို လမ်းညွှန်မှုပေးရာ အောင်မြင်ပါစေလို့ ကျွန်တော်ဆုမွန် ကောင်း တောင်းအပ်ပါတယ်။
ပြိုးပြိုးပြက်ပြက် ရောင်စုံခြယ် မီးရောင်အောက် တွင် ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်များ ပျော်ရွှင် ယစ်မူးစွာ ကခုန်နေကြသည်။ မြူးကြွကြွရက်ပ် သီချင်း အင်္ဂလိပ် စာသားကို ကခုန်ရင်း ပြိုင်တူဟစ် လိုက် သေးသည်။ စကပ်တိုတို၊ အင်္ကျီကျပ်ကျပ် ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးများမှာလည်း သီချင်း သံနှင့် အပြိုင် စည်းဝါးညီညီကနေကြသည်။
By marlarnyein 2876 days ago on ဗဟုသုတ from www.maukkha.org
ဆေးနဲ့ သွားကတော့ ထိပ်ဆုံးနေရာမှာ ရှိနေပါတယ်။ ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး လေ့လာသင်ယူရတာ ခက်ခဲသလို၊ ဘွဲ့ရရင်လည်း အောင်မြင်တဲ့ ဒေါက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အလွန်ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်ဆိုတာ ကတော့ ဘ၀အာမခံချက် အရှိဆုံးဘွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားခြင်း ခံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ လူဆိုတာက အိုခြင်း နာခြင်းကင်းနိုင်တဲ့သူတွေ မဟုတ်တော့ ဆရာဝန်အလုပ်ဆိုတာ ခေတ်အဆက်ဆက် အာမခံချက်ရှိနေဦးမှာပါပဲ။ လစာကလည်း အတော်လေးကောင်းတယ်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရေးသားထားသော " စီးဆင်းနေသော ဧရာဝတီ "
By mohmohkhin 2878 days ago on ဗဟုသုတ from shwemyanmarmediagroup.blogspot.sg
စစ်ဆေးရုံ ကားဂိတ်သို့ အမှတ်
(၉) ကား ထိုးရပ် လိုက်ချိန်တွင်
ညနေ ၃ နာရီ၊ ၄၅ မိနစ်သာရှိသေး
သည်။ လူနာ တွေ့ချိန်သည် ညနေ
၄ နာရီမှ ၆ နာရီ အထိဖြစ်၍ ၁၅ မိနစ် စောင့်ရပေဦးမည်။ အမှတ် (၂) ဂိတ်ပေါက်ဝရှိ အုတ်ခုံတန်း ပေါ်တွင်ထိုင်ရင်း ထောက်ကြန့်ကား ဂိတ်က ဝယ်လာခဲ့သည့် ၃၅ ပြားတန် ဒူးယား စီးကရက် တစ်လိပ်ကို အင်္ကျီအိတ် ကပ် အတွင်းမှ ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။
မီး ညှိရန်အတွက် ဘေး ဘယ်၊ ညာသို့လှမ်း
ကြည့်လိုက်သည်တွင် အုတ်ခုံအစွန်း၌ ဆေးလိပ် ထိုင်သောက်နေသည့် ဦးကြီး တစ်ဦးကို တွေ့၍ အနီးသို့ တိုးကပ်လိုက် မိသည်။
၀င်ပြိုင်ကြတဲ့ Miss International
Queen 2012 ပြိုင်ပွဲကို မကြာသေး
ခင် ထိုင်းနိုင်ငံ ပတ္တရားမြို့မှာ
By marlarnyein 2895 days ago on ဗဟုသုတ from 8yar.blogspot.sg
နံနက်ခင်းကတော့ အလင်းရောင်တွေ အခင်းအကျင်းနဲ့ ရောက်လာပြန်ပြီ။ လေပြေအချို့က တောင်မြောက် ပြေးလွှားရင်း လောကကို ကျီစယ်နေလေရဲ့။ ငှက်အချို့က အာရုဏ်အတက်မှာ အစာရှာ၊ ညဥ့်ပျော်ငှက်တွေက အိပ်တန်းတက်ဖို့ပြင်နဲ့ လောကတစ်ခွင်လုံး သူ့ဟာနဲ့သူ အံဝင်လျှက်ရှိကြသည်။ သို့သော် အံမဝင် အဆင်မပြေလှသူတစ်ဦးတော့ရှိလေရဲ့။ ထိုသူမှာ မြန်မာပြည် မြေလတ်ပိုင်း ရွာတစ်ရွာမှ သာဂိ ဟုခေါ်သော နွားကျောင်းသား တစ်ဦးပင်ဖြစ်သည်။
ဘာသာစုံ ၉ မျိုးကိုတက် ကျွမ်းနားလည်းတဲ့ လွတ်လပ်ရေး မီးရှူးတန်ဆောင်ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ
By mohmohkhin 2896 days ago on ဗဟုသုတ from shwemyanmarmediagroup.blogspot.sg
အရှင်ဦးဥတ္တမ ( ၁၈၈၀ မှ ၁၉၃၉ )
၊ အာရှတိုက်၏ ထွန်းသစ်ကြယ်အရှင်ဦးဥတ္တမကိုရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ ၊ ရူပရပ် ၊
ချောင်းနားတန်းတွင် ဖခင် ဦးမြသာဦး၊ မိခင်ဒေါ်အောင်ကျော့ဖြူ တို့မှ
(၁၈၈၀)ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာ(၂၈)ရက်တွင် မွေးဖွားခဲ့သော သားကြီးဖြစ်သည်။
ငယ်မည်မှာ ပေါ်ထွန်းအောင် ဖြစ်သည်။
By mohmohkhin 2896 days ago on ဗဟုသုတ from mhuthaw.blogspot.sg
By YaminThu 2896 days ago on ဗဟုသုတ from www.7daynewsjournal.com
အာရှမှာ ဒီလိုနေရာမျိုး ဘယ်နေရာမှာမှ နောက်ထပ်မရှိတော့ပါဘူး။ လူမျိုးစုမျိုးစုံကြားမှာ ရာစုနှစ်တစ်ခုထက်ပိုပြီး ပကတိအတိုင်း လန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ အရောင်အသွေးစုံလင်စွာ ရှိနေခဲ့တဲ့ ခန့်ညားပြီး အညတရဖြစ်တဲ့ ကိုလိုနီခေတ် အဆောက်အအုံတွေ ရာပေါင်းများစွာနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ မြို့ရှုခင်းတစ်ခုပါ။
အာရှရဲ့ အခြားမြို့ကြီးတိုင်းလိုလိုမှာ အတိတ်ကို ဘူဒိုဇာနဲ့ ဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့၊ လျင်မြန်တဲ့ ခေတ်မီတိုးတက်မှုဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံးမြို့နဲ့ အရင်က မြို့တော်ဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကိုတော့ ရှောင်ကွင်းခဲ့ပါတယ်။ Rangoon လို့ တစ်ချိန်က သိခဲ့ကြတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကို “အချိန်ကို ဖမ်းထားတဲ့မြို့”လို့ ဖော်ပြကြပါတယ်။
By kzyahtun 2901 days ago on ဗဟုသုတ from moemaka.org
I have an article of Saya U Tha Noe for you to read. At least, it can help you improve your english because there arealot of useful phrases and clauses that we can use in our everyday communication.
Just click on the small icon on the right to read the article.
Hope you will find it great!
By marlarnyein 2930 days ago on ဗဟုသုတ from dhammalatsaung.blogspot.sg
တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Tongren လို့ ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ အသက် ၇၀ အရွယ်ရှိတဲ့
ဘုန်းတော်ကြီး Hua Chi ဟာအနှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် တနေ့ ကိုအကြီမ် ၂၀၀၀ ကနေ ၃၀၀၀ အထိဝတ်ပြုဆုတောင်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ယခုအသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာတဲ့အခါမှာတော့ တနေ့ ကိုအကြိမ် ၁၀၀၀ ပဲဆုတောင်းဝတ်ပြုနိုင်တော့တယ်လို့ သူက၀န်ခံပြောဆိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ထူးဆန်းအံ့သြစရာကောင်းတာက မဆုတ်မနစ်သောဇွဲလုံ့ လနဲ့ သူ့ ရဲ့ ၀ီရိယပါရမီတွေဟာ
သူဆုတောင်းတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့သစ်သားကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ သူ့ ရဲ့ခြေရာ
မျက်လှည့်ဆရာ Dan White နဲ့ နီပေါနိုင်ငံက တရားကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီး
အိန္ဒိယနိုင်ငံက Yogi ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နေတဲ့ Rambhau လို့ ခေါ်တဲ့ ယောဂီကြီးဟာ
၁၉၇၇ ခုနှစ်ကစ၍ ငှက်ပျောသီးနှစ်လုံးနဲ့နို့ တခွက်ကို တနေ့ နှစ်ကြိမ်စားပြီး
နေလာခဲ့တာ ၂၆နှစ်ကြာခဲ့ပါပြီ။ အိပ်ချိန်ဆိုရင်လည်း တနေ့ ကို ၃ နာရီပဲရှိပါတယ်။
သို့ သော်လည်းသူဟာ ကျန်းမာသွက်လက်စွာနဲ့ ရှိနေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...။
အလွန်အံ့သြဘွယ်ကောင်း တာကတော့ သူ့ ကိုယ်ခန္တာကို အရှိန်ပြင်းပြစွာတောက်လောင်နေတဲ့
မီးတောက်ကြီးထဲမှာအိပ်ပြပြီးအလောင်ခံပေမယ့် မီးကသူ့ ခန္တာကိုယ်ကိုလောင်ကျွမ်းမသွားတာပါပဲ။
ဒီလိုဆိုရင်သူ ၀တ်တဲ့အ၀တ်တွေက မီးလောင်ခံတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ လုပ်ထားတာလားလို့ 
သူ့ အ၀တ်တွေကို အိန္ဒိယမှ အမေရိကန်နိုင်ငံကိုယူလာခဲ့ပြီးထင်ရ
By marlarnyein 2938 days ago on ဗဟုသုတ from www.missgreenlady.com